Kompany oo koobka rajo ka qaba - BBC Somali
Kompany oo koobka rajo ka qaba
15 Febraayo 2016
Image caption Vincent Kompany wuxuu wali rajo ka qabaa koobka
Kabtanka kooxda Manchester City, Vincent Kompany ayaa sheegay in ay axmuqnimo tahay in kooxdiisu ay hilmaanto taariikhdooda oo aysan u halgamin horyaalnimada Ingiriiska.
Kooxda City ayaa labo iyo hal lagu tumay kaddib markii ay gurigooda isku arkeen kooxda ay xifaaltamaan ee Tottenham waxayna hoos ugu dhaceen kaalinta afraad iyaga oo lix dhibcood ka hooseeya kooxda hogaanka haysa ee Leicester.
Waxaa goosha koobaad dhaliyay Harry Kane oo shabaqa ku hubsaday rigoore saxnimadiisa lagu murmay waxaase bareejo keenay Kelechi Iheanacho, balse waxaa goosha guusha wakhti dambe saxiixay Christian Eriksen.
Kompany ayaa BBC u sheegay in ayan jirin sabab ay uga niyad jabaan in ay hantaan horyaalnimada ingiriiska.
Kooxdan uu tababaro Manuel Pellegrini ayaa labo jeer waxaa ka kala badiyay Leicester iyo Spurs tan iyo markii macalinkan reer Chile uu shaaciyay in uu ka tagayo kooxda xagaagan waxaana badali doona Pep Guardiola.
City ayaa koobka qaaday labo jeer afartii sano ee ugu dambeeyay, xili ciyaareedkii 2010-11 waxay koobka ka qaadeen Manchester United oo sideed dhibcood ka horaysay markii hore ayse la soo gaareen oo ay goolal badni kaga qaadeen.
Xili ciyaareedkii 2013-14-kiina waxay labo dhibcood kaga qaadeen Liverpool oo markii hore todobo dhibcood ka horaysay.
Company ayaa sheegay in ay ahayd in ay u ciyaaran si ka wanaagsan sidii ay u dheeleen inkasta oo u arko in goosha koobaad ka hor ay ciyaar wanaagsan la yimaadeen isla markaasna ay si wanaagsan u difaac deen.
Wuxuu hadalkiisa ku oo gabogabeeyay in ay doqonimo tahay in ay iloobaan taariikhdooda iyo siyaabihii ay u soo kaban jireen marka ay xaaladdu ku xumaato.